Uhlelo losaziwayo lubuya no-Anele
IZOTHULWA wu-Anele Mdoda isizini yesibili yohlelo iCelebrity Night Game South Africa ezoqala ngenyanga ezayo kuthelevishiniIsithombe: SIGCINIWE
NOKUBONGWA PHENYANE | March 26, 2020
LUKHUZA ibuya ngo-Ephreli 19, ngo-9 ebusuku uhlelo oluqukethe osaziwayo abazobonakala kulo bedlala imidlalo eyahlukene, iCelebrity Game Night South Africa.
Lolu hlelo oluzobe lukhonjiswa esiteshini i-E! entertainment (Channel 124) kwiDStv, luqale ngonyaka odlule kanti lwethulwa ngusaziwayo wakuleli * -Anele Mdoda.
Kulona intokazi engumethuli wezinhlelo * -Ayanda Thabethe nosomahlaya uJason Goliath, bangokaputeni bamaqembu amabili asuke eqophisana.
ULee Raftery, ongumqondisi kwa-EMEA ophethe ezokukhangisa enkampanini iNBC Universal International, uveze ukuthi bakujabulele ukuthi isizini yesibili yohlelo izophinde yethulwe wu-Anele ngokuhlanganyela noJason no-Ayanda.
“Bonke laba bantu bazolethela ubumnandi abantu bakuleli abangeke babukhohlwe ngokubambisana nosaziwayo abazobe beqophisana emidlalweni eyahlukene esiyibekile. Ngalo sihlose okuhle kodwa njengoba kuwuhlelo olugcwele injabulo kungekho lapho ubona khona sekuxatshanwa ngenxa yokuthi osaziwayo noma sebenokungaboni ngaso linye,” kuchaza uLee.
Uthe lolu hlelo balususele kolwase-United States (USA), obelethulwa wusaziwayo osehlonishwe ngendondo emcimbini ama-Emmy Award, uJane Lynch, futhi okubajabulisayo ngalo wukuthi selukhonjiswa emazweni ahlukene.
“Esiqeshini ngasinye kungahlangana osaziwayo abahlukene abadlala imidlalo emangalisayo, eminingi yayo edinga ukuthi bacabange kodwa bangajuli kakhulu. Ukujula ngokomqondo nokwazi izinto ezenzeka emhlabeni esiphila kuwona, yikhona okusiza iqembu ngalinye ukuthi lidle umhlanganiso,” kuchaza yena.
Umsebenzi ka-Anele kulolu hlelo uthe wukuqondisa osaziwayo ababuze imibuzo okwenza uhlelo lujabulise.
Kwisizini edlule kulolu hlelo kubonakale osaziwayo okukhona kubo uMinnie Dlamini-Jones, Chef Nti, Maps Maponyane, DJ Fresh, Kuli Roberts nabanye.
Kule sizini entsha kulindeleke ukuthi kubonakale osaziwayo okukhona kubo uBusiswa, Nomuzi Mabena, Zulu Mkhathini nabanye.
Lolu hlelo lukhiqizwa yinkampani yakuleli iRapid Blue ezinze eGoli.